सद्‌गुरुः कोही पनि व्यक्ति ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि असक्षम हुँदैनन् । यदि तपाईं जान्नको लागि असक्षम हुनुभएको भए, म तपाईंमाथि आफ्नो समय बर्बाद गर्ने थिइनँ— विश्वास गर्नुहोस्, म यी कुराहरूप्रति एकदमै कठोर छु । यदि तपाईं पूर्ण रूपमा असक्षम हुनुहुन्छ भने, तपाईं कुनै सम्भावना नै होइन, तसर्थ म तपाईंसँग एक क्षण पनि खेर फाल्ने छैन । के तपाईंले मलाई कहिल्यै भ्यागुतोलाई ध्यान सिकाउने कोसिस गरेको देख्नुभएको छ ? मैले जीवविज्ञान (बायोलोजी) को कक्षामा बाहेक भ्यागुतासित एक क्षण पनि व्यर्थै बिताएको छैन, किनकि म त्यसमा कुनै सम्भावना देख्दिनँ ।
तपाईंले आफूलाई अनिच्छुक बनाउनको लागि के-के गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु नै उत्तम हुन्छ ।
सामर्थ्य सबैमा हुन्छ, इच्छुकता हुन जरूरी छ
विचारहरूमा ′तर′ आउनु नै अनिच्छा
म तपाईंको निम्ति समस्त अस्तित्व सम्हाल्ने छु, तर यो एउटा चीज— आफ्नो मन— लाई तपाईं आफेँले सम्हाल्नुपर्छ ।
म तपाईंको निम्ति समस्त अस्तित्व सम्हाल्ने छु, तर यो एउटा चीज— आफ्नो मन— लाई तपाईं आफेँले सम्हाल्नुपर्छ । तपाईंको मन अनिच्छाको स्थितिमा हुनुहुँदैन । ″हैन, हैन, म यो गर्न चाहन्छु, तर...″ । यही ′तर′ अनिच्छा हो । तपाईंले यो ′तर′ सित काम गर्नुपर्छ । यो ′तर′ लाई हटाउनको लागि तपाईंले आफ्नो जीवनलाई स्पष्ट रूपमा हेर्नुपर्छ— आखिर, तपाईं यहाँ किन हुनुहुन्छ ?
बाध्यात्मक प्रवृत्ति— पाशविक प्रकृति
मनुष्यको प्रकृति भनेको त सचेत भई सक्रिय हुनु हो— अर्थात्, आवश्यकता अनुरूप कार्य गर्नु ।
तपाईं वास्तवमा जो हो, यदि त्यसलाई जान्नको लागि तपाईं साँच्चिकै इच्छुक हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईंभित्र त्यसप्रति गहिरो इच्छा छ भने, तपाईं जोसुकै भएपनि, जहाँसुकै रहेपनि, म तपाईंसँगै हुनेछु ।